Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Qolka Musqusha ee Qolka Musqulaha ee leh Go'aanka Bullaacadda
qiimeeyay 4.74 out of 5 ku salaysan 23 ratings macaamiisha
Bixinta qaabka, waxqabadka iyo kartida, ururinta wowowfaucet waa dhameystirka ugu wanaagsan musqul kasta. Qiyaasta ugu badan ee qulqulka 1.2 g halkii seken waxay gacan ka geysan doontaa ilaalinta biyaha. Xirmooyinka alwaaxa ee alwaaxa wata ayaa bixiya nolol aan shaqeynayn oo dhibic lahayn, oo ay weheliso xaddiga birta isku xidha dheecaannada ayaa ka dhigaya dejinta ka dhakhso badan sidii hore. Dooro Fantastic ah oo maalin walba musqusha nooga
4 inch Xarunta Qubeyska Bath 2321400C Dhererka: 7.5 ″; Dhererka Cabirka: 4.4 ″; Cabirka Daloolka: 25 - 38 mm1 - 1.5 ″
Qolka Musqusha Qubayska Chrome ee raaxada: dhamaadka chrome raaxo leh, muuqaal u eg muraayad u eg, ku fiican qurxinta musqusha casriga, u dhigma guryaha kirada, guryaha is-kaashatada, qolka musqusha, isticmaalka ganacsiga, dalxiis
Qulqulka Gacanta Laba-geeska ah: Qaab-dhismeedka laba-geesood ah, oo sahlan oo lagu dheellitiro heerkulka iyo mugga, Xajirka sare ee arc wuxuu ku siinayaa nadiifin ku filan marka loo eego kansarka
Tayada Sare: NSF ceramic disk waxay hubisaa inaysan lahayn wax daadanaya, walax waarta (SS201, iyo zinc steel), aaladda ABS waxay siisaa biyo si tartiib ah oo jilicsan
SKU: 2321400C Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: daadinta kulanka, barafoobay dhalaalaya, kaalinta iska caabin
Naqshad weyn, muuqaal jilicsan iyo muuqaal casri ah. Sare u kaca tuubada ayaa xariiqda qulqulka qashinka oo leh qol lagu dhaqo gacmahaaga ama madaxaaga.
Kaliya aan jeclaan lahaa inay ka sameystaan ​​qasabad jikada jikada isla qaab isku mid ah.
Qasabad weyn iyo qiimo. Si fudud loo rakibo.
ku habboon musqusha. No more daadatoLooks classic. U shaqeeyaa si fiican oo shidaa biyaha si fudud oo siman.
Aad baan ugu qanacsanahay qiimaha, tayada iyo qaabka, waxay la timid nooca tuubada iyo galoofyada, waxaan heli doonaa mid kale oo ah musqusha kale ee aan ku jiro haddii ay dhinato.
Si aad u qurux badan, waxaan dhibaato ku qabnay rakibaadda bulaacada, laakiin adeegga macaamiisha wuxuu ahaa mid la yaab leh oo isla markiiba way na caawiyeen!
Ma ahayn wax aad u adag in la rakibo: tilmaamaha tallaabo-tallaabo waa cad yihiin oo dhammaan qaybaha ayaa si fiican u wada jaan qaadaya ， waxay u muuqdaan kuwo aad u fudud oo si fudud loo isticmaali karo - si ka duwan qasabadihii hore ee ay ahayd inaan aragno sababtoo ah rakibidda xun iyo daxalka. Guriga aan iibsannay wuxuu lahaa saxanno aad u qurux badan oo ku yaal qubayska sayidka; kuwani kama badna sheegiddooda waxayna ku habboon yihiin booska si aad u wanaagsan.
Tuubada ay iskeed u weyntahay. Waxaan kugula talin lahaa inaad iibsato lowska qasabada ee kala duwan midka la bixiyo ayaa ah mid laga cabsado oo aysan si sahal ah dunta uga jarin oo ay xitaa ka fududaato
Waxaan jecel nahay muuqaalka wajigan iyo tayada la dhisay waa mid ku habboon qiimaha, laakiin qashinkeena ayaan si sax ah wax uga qabanaynin taas oo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn in la xidho oo saxanka biyo ka buuxa.
Mid aad u fiican. Waxay umuuqataa mid fiican. Dhageyso warka duhurnimo
Tuubada waa fududahay in la rakibo oo waxay umuuqataa mid aad ufiican! Waa wax culus oo culus kharashka. Joojinta pop-up waa sheeko ka duwan. Waa wax yar, inta badan balaastig ah oo aad u adag in la qabsado. Waxay ahayd in la iibsado mid tayo fiican leh oo la beddelo bullaacadaha lagu daray.
Waxaan doonayay qasabad loogu talagay musqusha wiilashayda waana tan IT !! Runtii waa wax aad u fiican. Weliba way qulqulaysaa, taas oo aanan aqoon. Waxaan kaliya rakibnay laakiin waxay umuuqataa inay tahay mid tayo fiican leh!
Rakibaadda fudud iyo sida ugu wanaagsan Delta oo ay bedeshay. Waxay umuuqataa mid aad u qaali ah, in kasta oo muuqaal ahaan ka mugdi badan yahay nickel la caday
Waxay umuuqataa mid aad uqurux badan waxayna kadhigtay RV-ga yar yar ee wax lagu quusto waxbadan oo la isticmaali karo.
Tirada lagu kalsoonaan karo iyo nashqadda casriga ah ee qasabaddan. Ku habboon qolka musqusha guriga.
Waan jecel nahay qasabadahaan
U isticmaal qolka jiifka weyn. Si fudud loo rakibo, waxay leedahay tilmaamo cad. Waxay sifiican ugu egtahay nidaamka musqusha.
Aad bay u fiicnayd in la dhigo suulkayga hooyooyinka.
Waan jeclahay muuqaalka, waxay umuuqataa in kabadan kharashkeeda. Gacmuhu wuxuu noqdaa mid siman. Qulqulka qulqulka ayaa si fiican u shaqeynaya.
tani waa qasabad qurux badan oo ku amaantay musqusha si qurux badan oo si fiican loo qaabeeyey oo u qalantaa qiimaha hadda waxaan iibsaday tii labaad oo ku faraxsan sheygan
Kaliya maaha tan mid ka mid ah qasabadaha ugu quruxda badan ee aan haysto, ninkayga ayaa sheegay in ay fududahay in la rakibo oo noocyadu yihiin sida loo xayaysiiyo. Iibiyaha tuubada ayaa badeecada noogu haysay Waqtiga rikoorka waana mid si aad ah uga jawaabaya. Kaliya maahan inaan ahay milkiile guri, waxaan kaloo ahay Hantiile. Waxaan kula talin lahaa badeecadan iyo iibiyaha mid ka mid ah asxaabteyda iyo macaamiisha guryaha.
Waad ku mahadsan tahay adeegga macaamiisha weyn iyo badeecada cajiibka ah!
Kama fileynin qasab ka mid ah tayadan barta qiimaheeda. Weligay ma aanan maqal sumaddan ka hor, aadna waan ula dhacay tayada markii ay tani timid. Dhammaan qaybaha naxaasta ah ee gudaha ku jira, aad u culus, oo aan lahayn caag, si sahlan loo rakibo, xitaa qaybta bullaacaddu si fiican ayaa loo qaabeeyey. Waa badhan riix si aad u shaqeyso. Qaybtaas ugu adkayd waxay ahayd in la soo saaro qashin-qubkii hore. Ninkeygu ma ahan nin gacan-fudeyd ah oo nin wuxuu lahaa kii hore banaanka, kan cusub iyo wax walbo oo saacad kayar lagu dhigo. Iyo qaybta ugu fiican –wax ka sii qasabadaha tuban !! Ma sugi karo inaan arko biilkeyga xiga ee biyaha!